ချက်ပြုတ်သူ, ပုဂ္ဂလိကအိမ်ထောင်စုယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်တွေပြီးတော့ခံမှု Template ကို – JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / ချက်ပြုတ်သူ, ပုဂ္ဂလိကအိမ်ထောင်စုယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်တွေပြီးတော့ခံမှု Template ကို
ချက်ပြုတ်သူ, ပုဂ္ဂလိကအိမ်ထောင်စုယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်တွေပြီးတော့ခံမှု Template ကို
စူပါအဒ်မင် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized 1 မှတ်ချက် 578 views
အပူနှင့်အဲယားကွန်းမက္ကင်းနစ်နှင့်တပ်ဆင်ခြင်းယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / အခန်းကဏ္ဍနှင့်တာဝန်ယူမှု Template ကို
Install, ကုမ္ပဏီ, သို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းအိမ်ရာများသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်လေထုနှင့်အပူအေးစက်နည်းစနစ် restore.
ဝါယာကြိုး fix သို့မဟုတ်အစားထိုးရန်, အပိုင်းပိုင်း, သို့မဟုတ်ပျက်ယွင်းနေ tools များ.
ဆက်လက်များအတွက်လျှပ်စစ်ပုဒ်သို့မဟုတ်အပိုငျးပိုငျး Check, လျှပ်စစ်ကြောင်းအလုပ်သမားစမ်းသပ် devices များ.
သတ်မှတ်ချက်များနဲ့ options တွေနဲ့ technique ကိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့အတည်ပြုပေးရန်သို့မဟုတ်ပင်အမှားဖော်ထုတ်သိရှိနိုင်ဖို့စစ်ကြောနှင့်စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများ.
ပေါက်ကြားသို့မဟုတ်ရေပိုက်အဆစ်သို့မဟုတ်စာမေးပွဲပြွန်များအတွက်အဆက်အသွယ်, လျှောက်ထားဖိအားကတညျးအကဲဖြတ်ရန်- အခြားရွေးချယ်စရာ.
ခံရပျပွောဆို, တိုးတက်, သို့မဟုတ်တားဆီးကာကွယ်ရေးသို့မဟုတ် Standard ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးမြောက်, ထိုကဲ့သို့သောဥပမာ cleanup များအတွက်အဖြစ်, ဂီယာကိုဖုနျစုအာဏာအဝတ်လျှော်, သို့မဟုတ်, oiling ဒြပ်စင်, သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ filtration.
ချိန်ညှိခြင်းနှင့်ဂီယာအကြား lay-ထွက်နှင့် link ကိုပါဝါဝါယာကြိုး, အညီမှအသေးစိတ်အစီအစဉ် wiring, လျှပ်စစ်ရဲ့ handtools အသုံးချဖို့.
မျက်နှာပြင်များအတွက်အချပ်သို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းတွင်း, နံရံများ, ဂီယာကို set up ဖို့ဒါမှမဟုတ်အပေါ်ဆုံး, အစွမ်းသတ္တိကိုလွှသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်အသုံးချဖို့.
တွက်ချက်သည်, အနိမ့်, အပ်ချည်, သို့မဟုတ် Flex ရေပိုက်သို့မဟုတ်ပိုက်, ပိုက် fitteris ပစ္စည်းကိရိယာများလျှောက်ထား.
ductwork သို့မဟုတ်မူဘောင်ဒေသများလီဆယ်သို့မဟုတ် mount, သယ်ဆောင်သွားအရင်းအမြစ်များကိုသို့မဟုတ်ဂဟေဆော်ပစ္စည်းကိရိယာများကြောင်းသတ္တု-အလုပ်လုပ်အသုံးချဖို့.
programmable, စမ်းသပ်မှုများနှင့်ပရိုဂရမ်သွင်းထားရပါမယ်, သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်အိမ်ထောင်စုအိမ်များတွင်ကြိုးမဲ့အပူထိန်းကိရိယာပူနွေးလာမှုသို့မဟုတ်အအေးနှင့် ပတ်သက်. လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအသုံးပြုမှုလျှော့ချရန်.
တောင်ပေါ်က dehumidifiers သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောဥပမာကွန်ပျူတာတည်နေရာများအတွက်အဖြစ်ချိတ်ဆက်ထုတ်ကုန်, သပ်သပ်ရပ်ရပ်မလိုအပ်ကြောင်းနေရာများနှင့် ပတ်သက်., စာကျွမ်းကျင်မှုဖျော်ဖြေဖို့အခြောက်လေကြောင်းရန်.
သံလိုက်တောင်မှာ- converters, centrifugal chillers, သို့မဟုတ်ကြောက်မက်ဘွယ်လေကြောင်းအခြေအနေများပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဆက်စပ်.
Air-သန့်စင်စနစ်များကို Install သို့မဟုတ်ပြန်လည်ပြုပြင်, ထိုကဲ့သို့သောဥပမာအထူးသဖြင့် filtration သို့မဟုတ်ခရမ်းလွန်များအတွက်အဖြစ် (ခရမ်းလွန်) အလင်းရောင်သန့်စင်စနစ်များ.
ပြုပြင်ခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ခံမှုပူနွေးလာမှု, ventilating, နှင့် AC (HVAC) စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာဖို့ devices များ, ထိုကဲ့သို့သော filtration ပြောင်းလဲနေဖြင့်အဖြစ်, အဝတ်လျှော်လိုင်းများ, သို့မဟုတ်မဟုတ်တဲ့အဆိပ်ရေခဲသေတ္တာပြန်အားသွင်း.
ပူနွေးလာမှုနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးရန်သို့မဟုတ်ပြဿနာများခွဲထုတ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ပင်ပျက်ကွက်ကြောင်းအတည်ပြုရန်အသုံးပြုသူများအတွက်ရှိခြင်းအအေးအစီအစဉ်ကိုအမှားပြင်ခြင်းဖြင့်ပြုပြင်ကြခဲ့ကြသည်.
တောင်ပေါ်က, အပူထိန်းကိရိယာထိန်းညှိ, သို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်, humidistats, သို့မဟုတ်တိုင်မား.
လောင်စာဆီမှအပူသို့မဟုတ် Air-con ဂီယာ join, စုစုပေါင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းရန်ရေ.
ဒီဇိုင်းကျန်တာတွေအစီအစဉ်များကိုဆနျးစစျ, အပူသို့မဟုတ်အအေးထုတ်ကုန်အစိတ်အပိုင်းများအတွက် configuration ကိုသိရှိနိုင်ရန်ဖို့လည်းအချက်များ၏သင့်လျော်သောတပ်ဆင်သေချာစေရန်သို့မဟုတ် makersA တစ်ဦးကအကြံပေးချက်များ.
မူဝါဒများကိုလိုက်နာ, အသင့်တော်ဆုံးလိုအပ်ချက်များ, စင်ကြယ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏သို့မဟုတ်ဖြစ်စဉ်များ.
ဥပမာအား stokers အဘို့အရန်အချက်များ mount, လေထုပြွန်မှုတ်တံ flues, သို့မဟုတ်သက်သာရာသို့မဟုတ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတဆို့ရှင်, အပူသို့မဟုတ်အေးပစ္စည်းများမှ.
စံချိန်နှင့်စစ်တမ်းအခါသမယ, ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ, ပြဿနာများ, ဓာတ်အားမလုံလောက်မှု, အလုပ်တောင်းဆိုမှုများပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောထူးဆန်းအခြေအနေများ.
ထိန်းညှိမှုစနစ်ကုမ္ပဏီအားဖြင့် equilibrium ဖြစ်စဉ်ကိုရန်အကြံပြုချိန်ညှိဖို့ကိုင်တွယ်.
တည်ဆောက်, အနေအထား, နှင့်အေးသို့မဟုတ်အပူဂီယာ attach, အစီအစဉ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီရဲ့ features တွေလိုက်ရှာ.
တောင်ပေါ်ကသို့မဟုတ် selfcontained မြေပြင်-source ကိုအပူ restore တွန်းဒါမှမဟုတ် hybrid ကြမ်းပြင်သို့မဟုတ် airsource အပူ Carbon-ဗဟိုပြုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုလျော့ကျခြင်းနှင့်ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချတွန်း.
အဖုံးပိုက်, ကေဘယ်လ်သို့မဟုတ်ကွန်ကရစ်ခညျြအနှောသုံးပြီးအနေအထားထဲမှာ padding လေးလည်း.
အခြားလူများအဘယ်သို့ပြောသည်ကိုမှတစျခုလုံးကိုအာရုံစူးစိုက်မှုတက်ကြွ-နားထောင်ခြင်း-ပေး, သငျသညျကိုဖန်ဆင်းခံရအချက်တွေကိုနားလည်ရန်အချိန်လေးလည်း, သင့်လျော်သောအဖြစ်တောင်းခံမေးမြန်းချက်, အစားမှားကြောင်းအခါသမယမှာကြားဖြတ်ထက်.
နည်းလမ်းများများ၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အပြစ်အနာအဆာကိုသိရှိနိုင်ဖို့တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းနှင့်ဆင်ခြင်ခြင်း critical-အတွေးအခေါ်-အလုပ်သမား, ပြဿနာများရလဒ်များကိုသို့မဟုတ်အခြားကုစား.
သို့ချဉ်း ကပ်. -ရွေးချယ်ခြင်းသင်ယူခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေး / သင်ကြားပို့ချမဟာဗျူဟာများနှင့်တိကျသောအခွအေနေသင်ကြားမှုသို့မဟုတ်သည့်အခါသစ်ကိုအချက်များကိုကျွမ်းကျင်များအတွက်သင့်လျော်သောနည်းစနစ်အလုပ်သမား.
ကော်ပိုရေးရှင်း၏စောင့်ကြည့်ခြင်း-MonitoringPERDetermining စွမ်းဆောင်ရည်ကို, အခြားလူများ, သို့မဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်တိုးမြှင့်မှုများ generate သို့မဟုတ်ကုစားအရေးယူ.
လူမှုသူတို့ပြုမူအဘယ်ကြောင့်သူတို့ကျင့်သောကြောင့် othersA တုံ့ပြန်မှုမသိမဟုတ်သိနားလည်နိုင်စွမ်းကို-ဖြစ်ခြင်းနှင့် comprehension.
othersI အစီအမံစပ်လျဉ်း Dexter-ပြောင်းခြင်းလုပ်ရပ်များ.
Service ကိုအရှေ့တိုင်းဆန်-positive ပုဂ္ဂိုလ်များကူညီမှချဉ်းကပ်ရှာဖွေနေ.
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသုတေသန-လေ့လာတဲ့ဒီဇိုင်းလုပ်လိုအပ်ပြီးကို item လိုအပ်ချက်များကို.
အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်း-လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်စားသုံးသူလိုအပ်ချက်များကိုလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမှ devices များနှင့်နည်းပညာများကိုပြောင်းလဲနေတဲ့.
အရစ်ကျ-Installing ကိရိယာများ, မော်ဒယ်များ, ဝါယာကြိုးများ, သို့မဟုတ် packages များလိုအပ်ချက်များကိုတက်ဖြည့်ဆည်းရန်.
မတူညီတဲ့ဖြစ်ကြောင်း applications များနှင့်စပ်လျဉ်း programming-Writing ကွန်ပျူတာ packages များ.
ခြေရာခံခြင်းသည်-ကိုကြည့်ရှုခြင်းဘူးသီးစစ်ဆင်ရေး, အင်္ဂါရပ်များ, သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောညွှန်းကိန်းသည်လက်ရှိတွင်မှန်ကန်စွာဖျော်ဖြေကိရိယာလည်းမရှိသေချာစေရန်.
အရည်အသွေး-ထိန်းချုပ်ရေးအကဲဖြတ်-ဖျော်ဖြေစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်များ၏စုံစမ်းစစ်ဆေး, န်ဆောင်မှုများ, သို့မဟုတ်နည်းစနစ်ထိရောက်မှုမှန်းသို့မဟုတ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မှ.
အခြေအနေများတွင် systems technique ကို၏မျိုးလုပ်ကိုင်သင့်တယ်ဘယ်အရာကိုသုံးသပ်ခြင်း-ကိုစူးစမ်းခြင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့တိုးတက်မှု, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ, နှင့်လည်း setting ကိုအကျိုးခံစားခွင့်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဦးမည်.
နည်းလမ်းများအကဲဖြတ်-ကိုစူးစမ်းနည်းလမ်းများသို့မဟုတ် system ကိုစွမ်းဆောင်ရည်၏အချက်ပြခြင်းနှင့်မှန်ကန်သောစက်များ၏ပန်းတိုင်များသို့မဟုတ် performance ကိုခိုင်မာစေရန်လိုအပ်သည့်အတိုင်းအတာနှင့်အညီ.
ဘဏ္ဍာရေးအရင်းအမြစ်များ-ကိုစူးစမ်းဝင်ငွေ task ကိုပြီးစီးခဲ့ပြီရင်းနှီးမြှုပ်နှံခံရဖို့ဖွယ်ရှိသည်မည်သို့စီမံခန့်ခွဲမှု, ဤအခကြေးငွေများအတွက်စာရင်းရေးသွင်းခြင်း.
ပစ္စည်း၏စစ်ဆင်ရေးအရင်းအမြစ်များ-ရယူနှင့်စက်ကိရိယာများ၏သင့်လျော်အသုံးချမှစောင့်ကြည့်, အဆောက်အ, နှင့်ပစ္စည်းများသီးခြား function ကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့.
ဝန်ထမ်း၏အုပ်ချုပ်ရေးသူတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်းအမြစ်များ-ညွှန်ပြပြီးလူပုဂ္ဂိုလ်များ, လေးလည်း, နှင့်လုပ်ဆောင်လှုံ့ဆျောမှု, ကြောင်းအလုပ်အကိုင်များအတွက်အကောင်းဆုံးလူတွေကိုဖော်ထုတ်.
Link ၏ဒီပလိုမာ (သို့မဟုတ်နောက်ထပ် Two-နှစ်ဒီဂရီ)
High School တွင်ဒီပလိုမာ (GED သို့မဟုတ်အကြီးတန်း High School တွင်ညီမျှသောလက်မှတ်သို့မဟုတ်)
ထက်ပိုပြီး2နှစ်ပေါင်း, ပတ်ပတ်လည်နှင့်လေးနှစ်အပါအဝင်
အောင်မြင်မှုများ / ကြိုးစားခြင်း – 92.97%
တည်မြဲခြင်း – 92.22%
ကြိုးစားအားထုတ်မှု – 93.38%
အမိန့် – 92.35%
အခြားသူများများအတွက်ပြဿနာ – 90.20%
ယဉ်ကျေးမှုနေရာချထားခြင်း – 88.35%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 93.17%
စိတ်ဖိစီးမှုစာနာထောက်ထားရေး – 91.20%
customization / Mobility ကို – 89.67%
ယုံကြည်စိတ်ချရသော – 94.77%
အသေးစိတ်၏အသိအမြင် – 95.98%
ယုံကြည်စိတ်ချရသော – 90.83%
လွတ်လပ်ရေး – 95.91%
တီထွင်ဖန်တီးမှု – 93.22%
analytical အတွေးအခေါ် – 95.82%
Pingback: A Job Recruiter Will Never Tell These To You Immediately7Things – Forum P3 SRS